Ọbụonyenchịkwakasịnjọnke ebenrụọrụweebụọbụla-naọbụkarịakarịaka i nwere ike iche.
Ịna-aga na ebenrụọrụweebụgị、maọdịnayaniileịna-arụọrụsiri ike na-efu。 Kama nkeahụ、ịna-enwe nsogbu、oziezighịezijupụtarana mgbagwoju anya、maọbụkanjọ：空白、毛布na-achaọchan’enweghịihe ntinye iji soro.
Na nso nso a、o単なるm。 Ebenrụọrụweebụm niile na mberedeagaghịeburu、na-egosipụta "mmekoritanjikọta". エクウェタラm na m na-ama jijiji！ ma enwere m ike ime ihe iji gbakee、ana m aga n’ihu ime ihe iji mee kaọghara imeọzọ.
Ebenrụọrụgịna-adaụra、karịsịamaọbụrụnaịdabere na ya iji nweta egogị。 Ogeọbụlaọdịala nwere ikeịzụtaahịa、ndu、na ego ha ga enweta.
Ịna-eche ihu na-achaọchankeọnwụ、maọbụna-echegbu onwegịbanyere iheịga-eme mgbeọ単なるgị？ Mgbe nke abụmakagị.
3 Nzọụkwụ2：Nchọpụtansogbu WordPress
3.1 Otu esi eme ka WordPress
3.2 Esi edozinkwụsịデータ
4 Nzọụkwụ3：Lelee BochumWeebụgị
5 ムヘボチ …
Nke abụ "nzọụkwụ0" n’ihi naọbụghịusoro nhazi nsogbu、maọdịmkpaọdị.
Mgbesaịtịgịdịala、ọdịokémkpa iji mee kandịna-egegịntịnọrọna aka.
Mgbe onyeọbịana-aga nasaịtịgịmaọbụrụnaọgaghịemetụtaya、haga-aghọtankeọma。 Ọbụịhọrọma gaga-ewepụnsogbuahụ、maọbụmee kaọghọọiwe.
Ọbụrụnaịna-emetụmakọwaarandịna-egegịntịihe na-eme na mgbe ha nwere ikeịtụanya na ebenrụọrụweebụgịga-alọghachi、ha ga-enwekwu ndidi nanghọta.
Ọbụrụnaịnweghịha naakaghịaka、ha nwere ike iwe iwe na akaragị、maọbụkpebieịgaleta onyeasọmpikama.
Oziọmabụ、ọdịmfe igbochi nke a。 Naanịna-edebe ha naakaghịaka site na：
Imeọkwabanyere mgbasa oziọhana eze。 Debe ya nkenke、ma nyendịna-egegịntịihe doro anya nke ihe na-eme nakwa mgbe ha nwere ikeịtụanya naịlaghachi.
Na-ezipụozi ngwa ngwa na listigịmaọbụrụna i chere nasaịtịgịga-agbada maka ihekarịrịotutubọchị.
Ịdebeozi na ebenrụọrụweebụgị（ọbụrụna i nwere ike）。 Ọbụrụnasaịtịgịkadịelu naịnwere ikeịmemgbanwe na WordPressgị、ịna-eji ngwa mgbakwunyedịOgena-abịan’isi nso ijigosipụtaakwụkwọmmezi makandịwarbịehagaweebịehaga.
Rịbaama ozi njehie（ọbụrụnaọdị）ịna-enweta、wee was nseta ihuenyo。 Ndịa ga-adịmkpa maka usoronchọpụtansogbu、maịna-eme ya n’onwegịmaọbụna-achọenyemaka site naọkachamara.
ニジエジコタラ：Nke abụnjehie ihenchọgharịgịnwere ike inyegịmaọbụrụnaọna-eche ogologo oge ijijikọọma nweta datandịdịmkpaigosipụtaebenrụọrụweebụgị。 O nwere ike kpatara nsogbu nanjikọỊntanetịgị、ntọalanangwaọrụgị（dịkaFirewall）、ụlọọrụweebụgị、maọbụebenrụọrụweebụgị。 Nke a mere na ebenrụọrụweebụm、o weebụrụihe esemokwu oge naụlọọrụm nwere、Bluehost.
アチューホー404：Nke a単なるotu n’ime ebenrụọrụweebụm mgbeọnwụsịrị。 Ụlọna-arụọrụnke kema、maọbụrụna onyeọbụlana-edeakwụkwọ、ọga-adịkaọna-efu。 O weepụtanan’ụzọụfọdụ、mehichapụlafaịlụ.htaccess n’ogenchịkọtasaịtịahụ.
Chọtaghịサーバー：Njehie a nwere ike ime site nanjikọỊntanetịgị、maọbụsite na nsogbu nantanetịweebụgịmaọbụọrụmpaghara。 Wordbụobere ihe kpatara njehie WordPress na gburugburugịmaọbụngwa mgbakwunyefaịlụ.
空白の白い画面：Achịchana-achaọchana-eme ka nsogbudakwasịgịn’ihi naọdịghịihe doro anyaịga-eme。 Ọna-esitekarịnambipụtana koodu nkesaịtịgị、ma na WordPress maọbụisiokwu maọbụngwa mgbakwunye.
NjehieỊmepụtanjikọnjikọデータ：Nke abụnjehie WordPresskachasịemekarịnke nsogbu na nhazi nkefaịlụwp-config、dịkaahaọjọọdata maọbụpaswọọdụ。 Apụkwaraime ya maọbụrụna ihe nkesa datagịadịghịanabata ozi maka iheụfọdụ（nsogbu na onyena-elekọtaweebụgị）、maọbụmaọbụrụnaemerụlanchekwa datagị.
ウソロ・ニエヒエ・ゾロ・エゾ・ナ・ウェーベサイタ：Mkpokọtaweebụgịnwere ike igosi ezi maọbụrụnaọbụigosipụtakoodu mmeghe na ibe maọbụna nkesagị、dịka "ọrụachọtaghi," maọbụ "njedebe ana-atụghịanya ya." Nke a nwere ike siteme site na mgbakwunye maọbụisiokwu、maọbụsite nanrụrụaka nkegịisifaịlụWordPress.
Olileanya naọbụikpe na onyeọbụlaọzọnwere ikeịhụebenrụọrụweebụgịdịmma.
Gaa nasaịtịgịsite na iji ihenchọgharịọzọ
Jirinjikọịntanetịọzọ（Wi-fi）、maọbụjụọenyigịkaọlee ya anya
Ọbụrụna ebenrụọrụweebụgịgosipụtaraezi ihenchọgharị、ngwaọrụ、maọbụnjikọỊntanetị、ịchọpụtalaebe nsogbuahụdị。 Ịnwere ikeịnwetaenyemaka iji doziengwaọrụgịmaọbụnjikọ、maọdịkarịaala、saịtịgịkadịelu!
Ọbụrụna nsogbuahụadịghịnangwaọrụmaọbụnjikọỊntanetị、ọnwere ikeịbụnasaịtịWordPressgị.
Chee echiche banyere mgbanweọbụlaị単なるn’ogena-adịbeghịanya。 Ịmeela n’ogena-adịbeghịanya：
Emeliteregịisi WordPress mbipute
Ọbụrụnaịnwere ike、gbalịagbanwee mgbanweọbụlana-adịbeghịanya、maọbụweghachite site na ndabere ndabere、ijihụmaọga-edozi nsogbuahụ.
Otu esi eme ka WordPress
Maka izugbe WordPressarụpụtansogbu、nkembụna-agbalịịbanyena WordPressダッシュボード。 Ọbụrụnaịnweghịike、ọnwere ikeịbụmbipute Bochum、ọbụghịkwaokwu nasaịtịgị。 Otúọdị、ịga-anwale usoro nhazi nsogbundịa site naakaụntụBochumgịmaọbụonye FTPahịa。 Ọbụrụna emechibidorogị、leleeakwụkwọVishnu na Ezigbo Ihe Mere A Ga-eji KpochieGịna WP-Admingị.
Ọzọ、gbalịagbanwee na ndabara WordPress isiokwuịhụmaọbụrụna-edozi esemokwuahụ.
Ọbụrụnaọbụghị、gbalịakwụsịnkwanyegịniile ijihụma ga ga-edozi nsogbuahụ Ọbụrụnaọdị、ịnwereikeịmeghachiihenkwụnyegịn’otu n’otu ijichọpụtaonye na-akpata nsogbuahụ.
Ọbụrụna isiokwu maọbụngwa mgbakwunye na-akpata nsogbuahụ、n nwere ikeịkpọtụrụonyemmepụtamaka nkwado、ma jiri isiokwuọzọmaọbụngwa mgbuwunye na ug.
nsfọdụnsogbu WordPress kpatara ihe nchekwa datarụrụarụ。 Ọbụrụnaịna-enweta njehienjikọdata nchekwa、maịkwenyesiri ike na ozi nbanyegịnafaịlụwp-config ya ziri ezi、ịnwereike ijiọrụWordPress wuru ijigbalịaimezi nchekwa data。 Lelee Lori na post naNchọpụtansogbu MgbeMbugharịMwepụGịna OnyeỌhụụỌhụụaghọwoụramaka nhazinzọụkwụsite naịrụzinchekwa datagị.
Ọbụrụnaịbanyelanaakaụntụnnabatagịma enweghi ikeịchọtansogbuọbụla、masaịtịgịkadịala-maọbụmaọbụrụna inweghịikeịnwetaakaụntụịnụkụk chancek chance chanceụụụye ye ye ye ye ye chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chance chanceụụụụy y weebụgị.
Ịnwere ikeịleleebenrụọrụweebụnke onyena-elekọtagịnaakụkọmgbasa oziọhana eze ijihụmaọbụrụna haamaralarịnsogbuọbụla。 Ịnwere ikechọpụtana ha dara ala maka nhazi usoro、yana enwere ikeịnwetaozi gbasara mgbeịnwere ikeịtụanya nasaịtịgịga-akwado.
Ọbụrụnaọbụghị、nzọụkwụọzọbụịkpọtụrụnkwado。 Dabere naụdịnkwado onyena-elekọtaweebụgịna-enye、ịnwere ikeịkpọha maọbụmalitenkwurịtaokwundụiji nweta nkwado ozugbo、maọbụịnwere ike nkdere tiketi ike.
Mgbesaịtịm gbadara、agbalịrịmịnwetankwado site na nkatandụ、mana oge ichere echere na 30 nkeji、ya mere、aghaghịmịdeakwụkwọtiketi kama。 Mgbe mna-azaghịtiketi nkwado m ruoọtụtụizu、amaara m naọbụoge iji gbanweeụsụụndịagha。 Mgbe Bluehost eji nye nnukwuọrụ、achọpụtakwaram na ebenrụọrụm na-agbaọsọjirinwayọọnwayọọkarịanke hana-adị。 Ebeọbụna enwere m iheọpụtaraiji kwaliteọbịbịam、agbanwere mịnwetaVPS Bochum na InMotion kama.
Iji gbakee ngwa ngwa site nanchịkọtasaịtị、ịkwesịrịịdịnjikere tupu ya emee。 Jide n’aka na i nwere ezigbo ulo oru ntanetakwuweebụnakwa naịna-enwe mgbe niile na-akwadogịnasaịtị。 Zụliteonwegịnantanetịimenkwadoweebụgịwee mara ebeịga-aga maọbụrụnaịchọrọenyemakaọsọọsọ.
mgbe ogena-abịa、ịga-adịnjikere ma nwee ikeịgbakengwa ngwa mgbesaịtịgịna-agbada.
Ọ bụ onye nchịkwa kasị njọ nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla – na
yebụ onye nchịkwa kasị njọ nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla-na ọ bụ karịa
Ụ bụ onye nchịkwa kasị njọ nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla – na